हो, रोकिनै पर्दछ भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करी - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
हो, रोकिनै पर्दछ भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करी
नेपालका लागि युएईका राजदूत सईद हमदम अल नाक्वीले गतहप्ता श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टसँग शिष्टाचार भेट गरे । मन्त्री बिष्टले नेपालीहरु पर्यटक भिसामा गएर काम खोज्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राजदूतलाई आग्रह पनि गरे ।
भेटमा मन्त्री विष्टले युएईमा कार्यरत नेपालीका लागि २४ घण्टे विमा, करार बमोजिम नै न्यूनतम तलव र अरु सुविधा सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरे । यसैगरी निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सरकारले तोकेका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण भएकोमा त्यसलाई मान्य हुने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि मन्त्री विष्टले जोड दिए ।
राजदूत नाक्वीले भौतिक पूर्वाधारको विकास र आर्थिक समृद्धिसँगै युएई मध्यपूर्वको आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकसित हुँदै गएको र खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकहरु भन्दा पृथक ढंगले अगाडि बढिरहेको भन्दै नेपालबाट दक्ष जनशक्तिको माग समेत बढ्दै गएकोले त्यस्ता जनशक्तिका लागि युएईमा उच्च पारिश्रमिकको अवसर रहेको बताए ।
सो अवसरमा दुवै मुलुकले अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी एमओयू परिमार्जनका लागि दुवै पक्षबाट आवश्यक तयारी गर्ने र निकट भविष्यमा नै प्राविधिक टोली गठन गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
उक्त भेटघाटले श्रम मन्त्री बिष्ट भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न र बैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित गर्न तल्लिन रहेको सन्देश दिएको छ । मन्त्री बिष्टले २४ घण्टे बिमा, करार बमोजिमको न्यूनतम तलब र अन्य सुविधाको बारेमा पनि राजदूतसँग कुरा गरे । उनले भिजिट भिसामा घुम्न भनेर गएकालाई काम गर्न निरुत्साहित गर्न अनुरोध गरे । अर्थात भिजिटमा गएकालाई काम नदिन पनि आग्रह गरे ।
भन्न त मन्त्रीले धेरैथोक भनेको देखियो । तर मिडियामा एउटा कुराले बढी स्थान पायो, भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरुलाई काम नदिनु भनेर मन्त्रीले भने भनेर । समाचार र लेखको माध्यमबाट बिष्टको चर्को आलोचना पनि गरियो ।
युएईको मुख्य शहर बरदुबईमा रहेको एउटा भवनको चौथो तलाको फ्ल्याटमा रहेको दुःख सुखका साथ चारजना अट्ने एउटा कोठामा १० जनाजति नेपाली बस्छन् । उनीहरुलाई बरदुबईमै नेपालीद्वारा सञ्चालित नेपाली ट्राभल्सले काम खोजेर लगाईदिने शर्तमा ल्याएको हो । उनीहरुले जनही २ लाख ५० हजार देखी माथि नै बुझाएका छन । अबुधाबी, शारजाह, अजमान र अन्य राज्यमा पनि यसरी बस्ने नेपालीहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । उनीहरु पर्यटक भिसामा छन र युएई सरकारले उनीहरुलाई पर्यटक भनेर चिन्दछ ।
त्यसो त दुबई घुम्न त विश्वभरका मान्छेहरु आउँछन् । दुबईको मुख्य आयश्रोत पनि पर्यटन नै हो । पुरा युएई देशको दोश्रो र दुबई राज्यको पहिलो आयश्रोत पर्यटन नै हो । युएईको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी आय पेट्रोलियम पदार्थ हो भने बाँकी आय पर्यटन, रियल स्टेट तथा अन्य ब्यवसायले धानेको छ ।
दुबई राज्यको भने जम्मा आयको ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पेट्रोलियम पदार्थले धानेको छ भने पर्यटन र ब्यवसाय नै दुबईको प्रमुख आयश्रोत हो । बिभिन्न मुलुकका मानिसहरु दुबई घुम्न आउँछन् । दुबईले घुम्न र रम्नको लागि आकर्षक तथा रमणिय पर्यटक स्थलहरुको निर्माण गरेको छ । संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खालिफा, सबैभन्दा ठुलो दुबई मल, ठुलो अक्वारियम आदि देखेर मान्छेहरु छक्क पर्छन । विश्वका नामुद होटल र समुन्द्री किनाराहरुमा रमाउने पर्यटकहरुको भीड उती नै हुने गर्दछ ।
युएई घुम्नको लागि केही पनि कागजात चाहिन्न, पासपोर्ट र एक प्रति फोटो भए सजिलै भिसा उपलब्ध हुन्छ । जो कोही नेपाली पनि दुबई आएर यहाँको समृद्धि हेर्न सक्दछन ।
टुरिष्ट भिसा बिशुद्ध घुम्नको लागि दिईने भिसा हो, दुबई आएर काम खोज्नको लागि होइन । टुरिष्ट भिसा युएई सरकारले युएईको पर्यटन बिकासको लागि विश्वभरका मानिसहरुलाई दिन सक्छ । कुन भिसा कसलाई किन दिने भन्ने अधिकार पनि युएई सरकारकै हो ।
यस्तो हुँदा हुँदै पनि श्रम मन्त्री विष्टले नेपालका लागि युएईका राजदूतलाई टुरिष्ट भिसामा गएका नेपालीहरुलाई काम खोजेर उतै बस्न निरुत्साहित गर्नु भनेर किन भने ? बिषय सोचनीय छ ।
के यति जाबो कुरा मन्त्री बिष्टलाई थाहा थिएन होला ? के मन्त्री बिष्ट नेपालीहरुले राम्रो काम पाएको देख्न नचाहने मन्त्री हुन ? के उनी नेपाली जनताको प्रगती हेर्न चाहन्नन् ? के युएईमा राम्रो काम पाउन टुरिष्ट भिसामा नै आउनु पर्दछ ? अनी टुरिष्ट भिसामा विश्व भ्रमण गर्न पाउने नेपालीहरुको नैसर्गिक अधिकार होईन ? मन्त्री बिष्ट माथि यस्तै यस्तै प्रश्नहरु तेस्र्र्याईए ।
गतबर्ष पत्रकार निर्भिक नारायणले टुरिष्ट भिसामा आएका १० जना नेपालीहरु अलपत्र परे भनेर समाचार लेखे । ती १० जना नेपालीहरु जनही ३ लाख रुपैया तिरेर युएई आएका थिए टुरिष्ट भिसामा । उनीहरुलाई युएई ल्याउन नेपाल प्रहरी, अध्यागमनका कर्मचारी र म्यानपावर ब्यवसायीहरु संलग्न थिए । मानव तस्करहरुको संगठित गिरोह नै लागेको थियो ।
यसैगरी गतबर्ष नै अबुधाबीको मुसाफामा १९ जना नेपालीहरु अलपत्र परेको खबर आयो । उनीहरुलाई ठमेलमा रहेको नेपाली ट्राभल्सले युएईको एजेन्टसँग मिलेर गतिलो काम खोजीदिने आश्वासनमा ३ लाख भन्दा बढी पैसा असुलेर युएई ल्याईएको थियो । अबुधाबीमा महिनौ दिन बस्दा पनि काम नपाएपछि उनीहरु पत्रकार हुँदै दुतावासको शरणमा पुगेका थिए ।
यसरी गतिलो काम पाईन्छ भनेर नेपालीहरुलाई ठगेर युएई ल्याउने नेपालीहरुको गिरोह अहिले पनि युएईमा सकृय छ । यसकार्यमा केही भारतीय गिरोहहरुको संलग्नता समेत रहेको केही पिडित नेपालीहरु बताउने गर्दछन । यसरी युएई आउँदा नेपालीहरुलाई ६० देखी ७० हजार रुपैँयाको जागिर पाइने प्रलोभन दिईएको हुन्छ । जब नेपालीहरु भिजिट भिसा बोकेर दुबईको एयरपोर्टबाट बहिरिन्छन, एजेन्टहरुले उनीहरुसँग भएको १ हजार डलर र पासपोर्ट खोसिदिन्छन् । टुरिष्ट भिसामा आएका युएईका ती गरीब नेपाली पर्यटकहरुलाई शहर भन्दा पर लगेर राखिन्छ । जव दलालहरु सम्पर्कमा आउँदैनन् तव मात्र ती गरीब नेपाली पर्यटकहरुलाई आफुहरु ठगिएको थाहा हुन्छ । त्यो बेलासम्म धेरै ढिला पनि ।
यस प्रकृतिका घटनाहरु आजकल सामान्य लागिसके । गरीब नेपालीहरु काम खोज्न पर्यटक भिसामा आउने र अलपत्र पर्ने अनेकौ श्रृंखला हिजो देखी आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । घरखेत बन्धक राखेर आएका यी गरीब नेपालीहरुले युएईमा काम गर्न पाउने कि नपाउने ? काम खोज्न दिने कि नदिने ? शायद श्रम मन्त्री बिष्टको चासो र चिन्ता यिनिहरु प्रति भएको हुनुपर्दछ ।
मन्त्री बिष्टले २४ घन्टे बिमाको कुरा गरे । करार बमोजिमको सेवा सुविधाको कुरा जोडदार ढंगले उठाए । तर ती सबै गौंण बने । सामाजिक सञ्जालमा मात्र बिष्टले भिजिट भिसामा गएकालाई काम खोज्न दिनु हुन्न भनियो भनेर जोडतोडले आलोचना गरियो ।
श्रम मन्त्री बिष्टले के भन्नु पथ्यों त ? गरीब नेपाली पर्यटकहरुलाई काम खोज्न दिनु पर्छ भन्ने माग राख्ने ? त्यो हुन सक्दैन । प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ । नेपालमा बसेर अनलाइनमार्फत नै विश्वको जुनसुकै देशमा काम खोजेर जान सकिन्छ । युएईका धेरै कम्पनीहरुले रोजगारीको लागि बिज्ञापन खुलाउँछन् । बिशेषगरी दक्ष जनशक्ति जस्तै ईन्जिनियर, डाक्टर, नर्स, एकाउन्टेन्ट, सेल्स, सेफ आदि पदहरुमा ती कम्पनीहरुले बिभिन्न एजेन्सीहरुको माध्यमबाट कामदारको बिज्ञापन गर्दछन । ती पदहरुमा जहाँ बसेर भए पनि अनलाइन दर्खास्त दिन सकिन्छ । कम्पनीले बायोडाटा अध्ययन गरेर चाहिएको खण्डमा स्काईप अन्तर्वार्ता समेत लिने गर्दछ । सामान्य किसिमको (अनस्किल्ड) कामदारहरु भने बिभिन्न देशबाट आयात गरिन्छ जसको लागि उनीहरुले बिभिन्न देशहरुमा भएका म्यानपावर एजेन्सीहरुको माध्यम प्रयोग गर्छन् ।
युएई सरकारले समेत पर्यटक भिसामा युएई आएर काम खोजेर बस भन्दैन । भनेको छैन । त्यसैले पनि पर्यटक भिसामा आउनेहरुले बेला बखत आवश्यकता अनुसार अनिवार्य देश छोडेर जानु पर्दछ । काम पाएको खण्डमा पनि उनीहरुले नयाँ भिसाको आवेदनको लागि मुलुक बाहिर गएर फेरी आउनु पर्ने हुन्छ । (आवश्यकता अनुसार यो कानुन फेरबदल भईरहन्छ )
मानिसहरु शौखले, पैसा भएर नै विश्व भ्रमण गर्दछन र उनीहरुलाई पर्यटक भनिन्छ । घरखेत बन्धकी राखेर, ऋण लिएर पर्यटक भएर कोही पनि नेपाली विश्व भ्रमण गर्न जाँदैनन् । बिशेषगरी खाडी मुलुक त भरसक्य जाँदै जाँदैन । यदी कोही गए भने पक्कै पनि उनीहरु मानव तस्करको जालमा परेर गएका छन् । जागिर खोज्न र काम गर्न बिभिन्न देश जानको लागि देशको आफ्नै कानुन छ । सोही कानुन पालना गरेर कोही नेपाली बैदेशिक रोजगारमा जाओस । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु पर्यटक भएर होइन, कामदार बनेर जाओस, बिमा गरेर जाओस, सरकारी तथ्याँकमा नाम लेखाएर जाओस । मन्त्री बिष्टको आशय यही हो भने बिलकुल गलत छैन ।
यहाँ गोडा दुईएकले पर्यटक भिसामा आएर राम्रो काम पाए भनेर नपढेका, प्राविधिक ज्ञान नभएका लेबर कामको लागि नक्कली पर्यटक भएर टुरिष्ट भिसामा युएई घुम्न जान पाउनु पर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन । यसले अन्ततः तिनै मानव तस्करहरुको साथ दिन्छ भने तस्करीलाई बढावा दिन्छ । तपाईं गरीब पर्यटकको साथ दिए जस्तो गरेर मानव तस्करको मतियार बन्ने कि नबन्ने ? निर्णय गर्ने अधिकार तपाईंको ।
त्यसो भने के मन्त्री बिष्टले भनेको कुरालाई युएई सरकारले सुनुवाई गर्ला ? पर्यटक भिसामा गएका नेपालीहरुलाई युएई सरकारले काम खोज्न निरुत्साहित गर्ला ?
अहँ, त्यो पनि सम्भव छैन । तर के चाहिं हो भने, युएई सरकारलाई नेपालीहरु मानव तस्करको जालोमा कसरी पर्यटक भिसामा युएई पुग्छन भन्ने जानकारी भने भएको छ । यसले भोलीका दिनहरुमा सक्कली भिसामा नक्कली पर्यटक बनाएर गरीव नेपालीहरुलाई युएई पुर्याएर अलपत्र पार्ने मानव तस्करहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सहज हुनेछ । मन्त्री बिष्टको आशय पनि यही हुनु पर्दछ ।
तपाईसँग यसभन्दा फरक विचार छन् भनें तर्कपूर्ण स्वस्थ बहसका लागि पंक्तिकार सदैव तयार छ ।
(युएईमा कार्यरत मेघराज सापकोटा पत्रकारितामा पनि उत्तिकै सकृय छन् । यो सामग्री असोज १५, २०७५ मा प्रकाशित भएको हो ।)
यो पनि पढ्नुहोस् भिजिट भिषामा जानेलाई रोजगारी नदिन आग्रह
कसले गलत पाठ पढायो भिजिट भिषाको बारेमा मन्त्रीलाई ?
भिजिट भिषामा रोजगारी: गाडी दुर्घटना भएमा गाडी चलाउनै रोक्ने ?